Faallo: Saylac yaa leh ? Qaran, Qoomiyad Mise Qabiil? Aaway Dadkii Umaqnaa Magaaladan Qadiimiga? | Lughaya.Com
Faallo: Saylac yaa leh ? Qaran, Qoomiyad Mise Qabiil? Aaway Dadkii Umaqnaa Magaaladan Qadiimiga?
Added by cigebilig@gmail.com on October 13, 2012.
Tags: featured, Saylac
Sanad ka hor waxaan ka hadlay dhibaatada haysata magaaladan qadiimiga ee Saylac oo ay ku habsatay nasiibdaro dabiici ah , siyaasad xumo iyo dad la’aan gudaha iyo dibada
, dhibaatooyinkaas oo aan ka tilaamnay badweynta ku xeeran magaalada oo gudaha u soo gasha suuqyada iyo guryaha la degan yahay taas oo dhibaato ku haysa dadka iyo degaankaba ilaa hadana aysan jiren cid iska xilsaartay , mida labaad degmadan Saylac wax daryeel kama aanay helin nidaamyada dawliga ah ee kala dambeeyay iyada oo ahayd degmadu meelaha ay la soo baxaan cashuuraadka ugu badan ee bariga iyo baddu mida sadexaad, dadka sheegta degmada saylac oo ilaa hada aan la aqoon cida ay yihiin qurbaha iyo gudahaba sobob waxqabad muuqdana oo ay ka sameeyeen ma jiraan degmada ay kasoo jeedaan ama sheegtaan.
intaas hadii aan ku dhaafno mowdiicii hore maanta waxaan wax waxyar ka iftiiminayaa qaybaha ay ukala baxaan dadka magaalada saylac sheegtaa ama ku abtirsada iyo karti darada qurbojoogta reer saylac.
Magaalo madaxda Saylac oo ahaan jirtey hooyada ilbaxnimada , hoyga culuunta sayniska , diimaha iyo farshaxanka , meel kulmisa dadyow kala duwen oo kala wata dhaqano , caadooyin iyo diimo kala duwen ayaa la ildaran dhibaatooyinka aan kor ku soo xusnay iyadoo dadka sheegta ama ku abtirsadaa ay ku baahsan yihiin caalamka . Hadaba marka ay nu ka tagno qabiilka iyo qabyaalada waxaynu inyar ka faaloonaynaa waxtar laanta qurbojoogta iyo qolqoljoogta degmada saylac oo noqday kuwo aan fikir iyo faaiido ku soo kordhin magaaladan aad moodo inuu habaar ku dhacay markaad eegto xaaladeed degaan. aan ku horeyno oo aan u kala qaadno sadex qaybood dadka sheegta magaalada saylac.
1. dad aan ku dhalan ama u dhalan magaalada oo aaminsan in awoowyaashii ama qabiilkiisu deganan jireen sidaadna ku sheegta magaalada laakiin aan waligii cagtiisa dhigin magaalada saylac waxtarna aan u lahayn .
2. dad ku nool magaalooyinka waaweyn ee jabuuti , boorama , diri dawa iyo hargeysa oo mar uun dhegtooda ku dhacday magaalada saylac idinka ayaa lahaa berri ilaa hadana aan cadayn karin sida iyo qaabka ay ku yeesheen waxtarna daa hadalkii.
3. kooxdan sadexaad waa qayb mudo yar ku noolaan jirtey ama deegaan ahaan xad la leh saylac oo ay keeneen dhaqaale yar markii magaaladu gudhayna iskaga haajirey laakiin aan ka tagin sheegashadeeda oo luxudka la soo kaca marka dhaqaaq siyaasadeed ka bilaamo balse aan waligood gudun u soo daabin magaalada baahida badan ka muuqato.
Hadaba iskuwada geeyoo magaalo yaa leh ? ma ninkii waxtara , camira ,dhibtana iyo dheeftaba la qaybsada ayaa leh mise ninka aan waxna u tarin waxna ku kordhin ee magac ahaan sheegta maalinta dhaqdhaqaa jirona madax kor u soo qaaada ?
Qurbojoogta reer saylac xagay joogaan ama maxay ku iloobeen magaalada magaceeda iyo muuqeedu kala weyn yahay maanta ? maxaan mar uun u maqli weyney mashruucaas ayay ka fuliyeen degmada? dhaqtarkiibaa dayacan, iskuuladii baa daldaloola dekadiiba jajabtay , biyo macaan ma leh .. maxay talo iyo tusaale mid uun dadkooda u tari waayeen ileen dadka qurbaha degamada ka joogaa ma yara oo carab iyo cajaba waa leeyihiini?
Sheegashada madhan inta la iska dhaafo magaalada ha loo gurmado inta gacmaha la isqabsado goboladan Awdal iyo Salal waligood ka bixi maayaan dhibaatada dhaqaala xumada ee haysata ilaa inta ay dib udhis ku samaynayaan dekadaha daayacan ee ku yaal magaalooyinka qadiimiga ee ay ku duugan tahay taariikhda ma guuraanka ah ee soomaaliyeed.